मंसिर २४, २०७६ ०७:५५:४४
बलिउड अभिनेत्री आलियाको ८० हजार भारुको ड्रेस बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट यतिखेर महङ्गो ड्रेसका कारण निकै चर्चामा छिन् । उनको फेशनले धेरैको ध्यान खिचिरहेको हुन्छ । मंसिर २१, २०७६
सामाजिक सञ्जालमा छायो पोर्नस्टारको ग्ल्यामर लूक [तस्वीरहरू] बलिउड अभिनेत्री तथा पूर्व पोर्नस्टार सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने गर्छिन् । उनले हट अवतारले गर्दा फ्यान उनीप्रति आकर्षित हुन्छिन् । मंसिर २०, २०७६
हट अवतारमा अदिति अनमोल केसीसँग फिल्म ‘कृ’ मा अभिनय गरेकी अभिनेत्री अदिति बुढाथोकी यतिबेला बैंककमा छिन् । उनी घुमघामका लागि त्यहाँ पुगेकी हुन् । मंसिर १९, २०७६
‘मुन्नी बदनाम’ पछि सलमानको ‘मुन्ना बदनाम’ सलमान खानको फिल्म ‘दंबग’ मा समावेश आइटम गीत ‘मुन्नी बदनाम हुई’ लोकप्रिय छ । फिल्मको तेस्रो सिक्वेलमा समावेश ‘मुन्ना बदनाम हुवा’ गीत सार्वजनिक गरिएको छ । मंसिर १५, २०७६
बिकिनी अवतारमा दिशा पटानी हट गर्ल दिशा पटानी जब बलिउडमा आइन्, तब उनी आफ्नो फिल्मका कारणभन्दा बढी आफ्नो हट अवतारका कारण चर्चामा छिन् । मंसिर १४, २०७६
विश्वका १० सबैभन्दा सुन्दर महिला विश्वका सबैभन्दा सुन्दर महिलाहरुको सूचीमा हान्डे एर्सेल रहेकी छन्। मंसिर १४, २०७६
‘पागलपंती’ले किन बक्स अफिसमा कमाल गर्न सकेन ? बलिउड अभिनेता जोन अब्राहमको मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘पागलपंती’ गत शुक्रबारबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आइसकेको छ । मंसिर १३, २०७६
हेर्नुहोस् मन्नै लोभ्याउने डेनीको बोल्ड तस्बिर सुन्दरताको चर्चा जहाँ पनि हुन्छ । मंसिर १३, २०७६
सलमानको ‘ दबंग–३’काे रिलिज रोक्न माग बलिउडमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक स्क्रिन पाउने अनुमान गरिएको चलचित्र ‘दबङ्–३’ पुन एकपटक विवादमा तानिएको छ । छायांकनको क्रममा शिव लिङ्गलाई आदर नगरेको आरोपमा फसेको यो चलचत्रि अब भने चलचित्रको गीतलाई लिएर चर्को विरोधमा फसेको छ । मंसिर १२, २०७६
बलिउड अभिनेता वरुण धवन ढुंगामा अड्किएको कारमा फसेपछि... बलिउड अभिनेता वरुण धवन आफ्नो नयाँ फिल्म 'कुली नं. १' को सुटिङमा व्यस्त छन्। हालै पुणेमा उनको फिल्मको एक स्टंट दृश्य सुटिङ भएको थियो। सुटिङक्रममा उनले निकै समस्या भोग्नुपरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। मंसिर ११, २०७६
फिल्म ‘पागलपन्ती’ को बक्स अफिस कलेक्सन कति? जोन अब्राहम, अनिल कपूर, अरशद वारसी, पुल्कित सम्राटको कमेडी फिल्म ‘पागलपन्ती’ ले बक्स अफिसमा औसत व्यापार गरिरहेको छ । मंसिर ९, २०७६
सलमानदेखि कट्रिनासम्म जसले स्कुल गएर पढेनन् ! भारतीय फिल्म उद्योगका बारेमा नेपालीहरुले विशेष चासो राख्ने गरेका छन् । अधिकांश जसो भारतीय फिल्महरु नेपाली सिनेमा हलहरुमा प्रदर्शन हुने गरेका छन् । कतिपय नेपाली दर्शकले त नेपाली नभइ हिन्दी फिल्ममात्र हेर्नेसमेत गरेको पाउन सकिन्छ । मंसिर ८, २०७६
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको एउटा तस्वीरले सामाजिक सञ्जालमा उठ्यो सवाल लिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा शेयर गरेको एउटा तस्वीरलाई लिएर उनका समर्थकले सवाल उठाएका छन् । मंसिर ७, २०७६